အဆိုပါ Lego အုပ်စုတွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ခဲ့သည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part ဒီဇိုင်းနာများသည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော ၇၀၈၄၀ မှတစ်ဆင့်စကားပြောကြသည်။ Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသီးသန့် The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်! အစုံမှာဖြန့်ချိခဲ့သည် shop.LEGO.com။ ဤအကြီးတွေ, အထင်ကြီးမော်ဒယ်များများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့, Lego အကြီးတန်းဒီဇိုင်နာ Justin Ramsden၊ Graphic Designer Mike Patton နှင့် Element Designer Ruth Kelly တို့ကအစီအစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းပြောဆိုသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို Group မှထုတ်ဝေခဲ့သည်။
e3,178 အပိုင်းအစများသည်ယခင် Bricksburg နေထိုင်သူများနေထိုင်ခဲ့သည့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေရာကိုပြန်လည်ဖန်တီးပြီးသီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည်။
ပိုပြီးနောက်ကွယ်မှ -The- မြင်ကွင်းများသည် Lego ရုပ်ရှင်2ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, အမိန့် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း Unicitty နှင့် Nicolaas Vas တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့် Matthew Ashton မှဆွေးနွေးတင်ပြသောနံပါတ် ၂ သည်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည် 70831 Emmet ၏အိပ်မက်အိမ် / ကယ်ဆယ်ရေးဒုံးပျံ။ မဂ္ဂဇင်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည် တစ်ခုတည်းမိတ္တူ (ပေါင်းစာပို့ခနှင့်ထုပ်ပိုးမှုစသည်) သို့မဟုတ် p အဖြစ်art တစ်ဦး၏ 12- ပြissueနာ or 24- ပြissueနာ အခမဲ့စာပို့ခနှင့်ထုပ်ပိုးအတူလျှော့စျေးနှုန်းမှာစာရင်းပေးသွင်းခြင်း။
အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်! မှာသီးသန့်ယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2019 ရက်တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
← ပါရမီရှင်ဆောက်လုပ်သူ Jme Wheeler က LEGO ဒီဇိုင်နာ၏အခန်းကဏ္veကိုပါ ၀ င်ခဲ့သည်
Lego Star Wars 75228 Escape Pod vs. Dewback Microfighters သုံးသပ်မှု →